Akwụkwọ akụkọ 5 gbasara owu ọmụma | Bezzia
5 akwụkwọ akụkọ gbasara owu ọmụma
Maria onyekwere | 09/09/2021 12:00 | omenala
Mgbụsị akwụkwọ bụ oge na -akpọ gị oku ka ị gụọ. Mgbe ndụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke oge ọkọchị na ike ọgwụgwụ nke oke okpomọkụ kpatara, ndị na -agụ akwụkwọ na -ahụ oge mgbụsị akwụkwọ ka ọ bụrụ oge kacha mma iji mikpuo onwe anyị n'ọgụ agụmagụ na melancholic. Ee, kwa, ndị mbipụta akwụkwọ n'oge a na -alaghachi n'ihe ha na -emebu ma soro ha na -ede akụkọ.
Na -agagharị na katalọgụ ndị na -ebipụta akwụkwọ, Anyị achịkọtala akwụkwọ akụkọ ise nke ihe odide ya, maka ebumnuche dị iche iche, na -ebi oge owu ọmụma. Ọgụgụ nke anyị kwenyere na ọ dabara adaba maka oge nke afọ a ma ebipụtala ma ọ bụ ga -ebipụta n'ime ọnwa Septemba a.
1 Agwa Aghụghọ
2 Ụda Quartet
4 Nwanyị na nwamba abụọ
Onye edemede: Paulina Flores
Onye mbipụta: Seix Barral
Mgbe ị kwụsịrị ọrụ ị kpọrọ asị, Marcela na -agbapụ na ndụ ya na Santiago de Chile ịga leta nna ya na Punta Arenas, na Patagonia. N'ebe ahụ, ọ chọpụtara na Miguel, onye ya na ya nwere mmekọrịta dị mgbagwoju anya, na -ezo nwa okorobịa Korea nke otu ndị ọkụ azụ gbapụtara n'oké osimiri. N'ịbụ onye nọpụrụ iche n'azụ mgbidi ịgbachi nkịtị na akụkọ na -akpata ọgba aghara, Lee bụ ihe omimi ịkọwapụta, onye lanarịrị ebe ha abụọ tụgharịrị iji zere idozi esemokwu ha.
N'ịbụ ndị ezigbo ndị ọkwọ ụgbọ mmiri nke ọwụwa anyanwụ na -etinye ndụ ha n'ihe egwu site na ịwụpụ n'ụgbọ mmiri nke ụlọ ọrụ na -agafe na Strait nke Magellan, Aghụghọ Aghụghọ na -akọ akụkọ banyere ndị gbara ọsọ atọ ndị na -achọ ebe mgbaba ka ha ghara ịda mbà. Na -ekwu maka ọnọdụ nrigbu nke oke osimiri na ọnọdụ ọrụ na -agaghị echetụ n'echiche na narị afọ nke XXI, akwụkwọ akụkọ ahụ gafere ókè nke eziokwu iji rute n'ikpere mmiri ọhụrụ, nke owu ọmụma, mmejọ na obi nkoropụ ka nwere ike bụrụ ihe egwuregwu.
Edere ya na ihe nkiri sinima Onye ga-eketa sinima Korea, dị ka abụ na-eme ihe ike, Isla Decepción bụ akwụkwọ akụkọ mbụ echere Paulina Flores, onye meriri na Roberto Bolaño Prize, nke Granta họpụtara dị ka otu n'ime ndị na-akọ akụkọ kacha mma n'asụsụ Spanish na akwụkwọ mbụ ya, Qué ihere. , ka ndị nkatọ ji otu olu too ya ma tụgharịa asụsụ ya na mba ụwa.
Onye edemede: Barbara pym
Onye nkwusa: Gatopardo ediciones
Barbara Pym dere Quartet mgbụsị akwụkwọ na -enweghị nnukwu olile anya na ọ ga -ahụ ìhè nke ehihie. E bipụtabeghị ya ogologo oge, na-atụle ndị editọ ya na etinyerela ya n'ọkwa nla na-eri na obere azụmahịa. Mgbe onye na -ede uri bụ Philip Larkin na onye nkatọ Lord David Cecil kwuchara ọnụ ahịa ha, Pym chọtara onye mbipụta akwụkwọ a, nke mechara bụrụ Onye mmeri nke Booker Prize na 1977 wee depụta ya dịka otu n'ime ndị edemede Bekee kacha agụ na hụrụ n'anya nke narị afọ nke XNUMX.
Ndị protagonists nke akwụkwọ akụkọ a na -arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ ma ha na -eche mgbụsị akwụkwọ nke ndụ ha ihu na ịnọ naanị ha. Letty ga -ala ezumike nká n'achọpụtaghị ịhụnanya. Marcia nwere agwa dị omimi na nke enweghị isi, agwa ndị a kwalitere kemgbe ọ nwere mastectomy. Edwin bụ nwanyị di ya nwụrụ nke na -enwe mmasị ịga emume okpukpe, na Norman bụ onye na -ekwukarị okwu mkparị. Ha niile na -ebi ogologo oge n'etiti ncheta agha ha, onyinye ha na -aghọtaghị - London nke okwute na mpịakọta na miniskirt - yana ọdịnihu dị njọ. Otú ọ dị, ha niile na -anọgide na -achọ olileanya n'ime ọha mmadụ nke na -agbakụta ha azụ ma ọ bụ na -emere ha ebere.
Onye edemede: Carlota Gurt
Onye nkwusa: Akwụkwọ Asteroid
Bọchị nbipụta: 13/09/2021
Mei, nwanyị gbara afọ iri anọ na abụọ N'ịbụ onye mikpuru onwe ya n'alụmdi na nwunye enweghị mmasị na onye chụpụrụ ya n'ọrụ, ọ kpebiri ịgbaba n'ụlọ ebe o toro, obere ụlọ ọrụ ugbo n'etiti oke ọhịa. N'ebe ahụ ọ ga -anwa ide akwụkwọ akụkọ nke na -enye ya nsogbu kemgbe ọtụtụ afọ ka ọ na -eche ihe gara aga ya, onyinye na -adabaghị adaba na ihe ga -eme n'ọdịnihu.
Akwụkwọ akụkọ a bụ akụkọ banyere nnupụisi, akụkọ owu ọmụma na -enweghị nchegharị kọrọ na ngụkọta ụbọchị 185 na-akpali mmasị. Gịnị bụ owu ọmụma? Eziokwu ebumnobi ma ọ bụ ọnọdụ uche, ngọzi ma ọ bụ nkatọ? Naanị otu ihe doro anya bụ na ị nweghị ike ịpụ na ịnọ naanị gị.
Nwanyị na nwamba abụọ
Onye edemede: Ayanta Barilli
Onye nkwusa: Editorial Planeta
Bọchị nbipụta: 22/09/2021
Onye protagonist, transcript nke onye edemede n'onwe ya, na -akọ ma na -akọkwa oge owu ọmụma, nke nwere mmetụta nhapụ na ọpụpụ ụmụ ya, onye ọ bụla na -aga ebe ha na -enweghị ike ịga.
N'ime ọnwa ndị a, naanị nwamba ya abụọ so, ide ihe ga -abụ naanị ihe iguzogide kwere omume n'oge nsogbu. Ọ ga -enyocha oge ndụ ya, nke a na -ahụ site n'ụzọ dị mkpa, ebe nwanyị - onye bụkwa nwa nwanyị, nne na onye hụrụ ya n'anya - ga -abụ onye ụgha.
Nnupụisi ga -abụ ìhè nke ga -eme ka ụzọ gị mara mma.
Onye nkwusa: Trotalibros
Bọchị nbipụta: 29/09/2021
"Owu ọmụma ya gbara ọkpụrụkpụ wee kpachie mkpụrụ obi ya dịka pole gleba."
Mila, onye lụrụ Matias n'oge na -adịbeghị anya, otu nwoke ọ na -amachaghị na -ahapụ ụlọ ya ka o soro ya gaa n'ugbo nta dịpụrụ adịpụ nke dị n'elu ugwu mgbada. Mgbe ọ bịarutere, ọ ga -ezute Gaietà, onye ọzụzụ atụrụ tozuru oke, na -amụmụ ọnụ ọchị ma nwee amamihe, yana imanima, onye na -achụ nta ọjọọ. Owu ahụ siri ike na ihe ndị dị n'ime ya na -eduga Mila ime njem ime na -alaghachi.
Owu ọmụma, ọmarịcha mkpụrụedemede Catalan, Ebipụtara ya na mmalite narị afọ nke XNUMX, ọ ka na -abawanye nke ọma na ọdịnaya na n'ụdị. N'ihi nke a, ọ dị mkpa maka ntụgharị okwu a, ebe onye na -ede uri na onye ntụgharị okwu Nicole d'Amonville Alegría na -atụgharị nke ọma n'asụsụ Spanish oke ịba ụba, nsụhọ na abụ na -adị mgbe niile na amụma Caterina Albert.
O doro anya na anyị agụbeghị nke ọ bụla n'ime akụkọ akụkọ a n'agbanyeghị na anyị nwere, ọkachasị, abụọ n'ime ha n'okporo ụzọ anyị. Kedu maka gị? Kedu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ a nke kacha dọọrọ mmasị gị? Ọ na -amasị gị ịgụ akụkọ dị ka ndị a ka ọ masịrị gị ọgụgụ omimi ma ọ bụ ọkụ ọzọ na ngwa nju oyi?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » omenala » 5 akwụkwọ akụkọ gbasara owu ọmụma
Onu uzo mbu iji nabata ulo gi
Ndụmọdụ 5 maka ịchekwa uwe na akpụkpọ ụkwụ n'oge ọkọchị